Nidaamka Kukiyada ▷ ➡️ Soo hel khadka tooska ah ▷ ➡️
1 Siyaasadda cookies
1.1 Kukiyadaha ay isticmaalaan shabakadan
1.2 Kukiyada sadexaad ee aan u isticmaalno degelkan iyo inaad ogaato
1.3 Sida loo maareeyo loona curyaamiyo cookies-kaan
LSSI-CE waxay ubaahantahay dhamaanteen kuwa leh baloog ama degel Uga dig isticmaalaha jiritaanka cookies-ka, u sheeg iyaga oo u baahan ogolaansho inaad kala soo baxdo.
Qodobka 22.2 ee Sharciga 34 / 2002. Adeeg bixiyayaashu waxaa laga yaabaa inay u isticmaalaan kaydinta xogta iyo soo celinta aaladaha qalabka Territures ee qaataha, haday sidaas tahay Bixiyeen oggolaanshahooda kadib markii la siiyay macluumaad cad oo dhammaystiran oo ku saabsan isticmaalkooda, qaas ahaan, ujeeddooyinka sameynta xogta, iyadoo la raacayo qodobbada Sharciga Organic 15 / 1999, ee Diseembar 13, ee Ilaalinta Xogta Shakhsiga ah ”.
Aniga oo ah qofka masuulka ka ah degelkan, waxaan isku dayay in aan u hoggaansamo sida ugu adag ee qodobka 22.2 ee Sharciga 34/2002 ee Adeegyada Bulshada Macluumaadka iyo Ganacsiga Elektaroonigga ah ee la xiriira cookies, si kastaba ha noqotee, anigoo tixgelinaya habka midka ka shaqeeya internetka iyo bogagga internetka, had iyo jeer suurtagal maahan in la helo macluumaad cusboonaysiin ah oo ku saabsan buskudka ay dhinacyada saddexaad u isticmaali karaan websaydhkan.
Tani waxay qusaysaa gaar ahaan kiisaska uu websaydhkan ka kooban yahay waxyaabo isku dhafan: taasi waa, qoraallo, dukumiintiyo, sawirro ama filimaan gaagaaban oo meel kale ku kaydsan, laakiin waxaa lagu muujiyey websaydhkeenna.
Sidaa darteed, haddii aad ka hesho nooca noocan oo kale ah boggaga internetka oo aan ku jirin liistada soo socota, fadlan ii sheeg. Sidoo kale waxaad la xiriiri kartaa qaybta saddexaad si toos ah si aad u weydiisatid macluumaadka ku saabsan cookies-ka aad dhigatid, ujeeddada iyo muddada cookie-ka, iyo sida uu dammaanad-qaadey asturnaantaada.
Kukiyadaha ay isticmaalaan shabakadan
Kukiyada waxaa loo isticmaalaa websaydhkan gaar ah iyo dhinac saddexaad Si aad u hesho khibrad fiican oo ku saabsan dhiraandhirinta, waxaad la wadaagi kartaa waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada, si laguu tuso adiga xayeysiisyo ku saleysan danahaaga iyo helitaanka tirakoobka isticmaalaha.
Isticmaalaha ahaan, waad diidi kartaa haynta macluumaadka ama macluumaadka adoo xayiraya boggagaas adigoo adeegsanaya qaabeynta habboon ee biraawsarkaaga. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in, haddii aad sidaas sameyso, boggan uma shaqeynayo sida saxda ah.
Shuruudaha lagu soo daray Qodobka 22.2 ee Sharciga 34 / 2002 ee Adeegyada Bulshada Macluumaadka iyo Ganacsiga Elektaroonigga ah, haddii aad sii wado raadinta, waxaad bixin doontaa ogolaanshahaaga isticmaalka buskudka oo aan faahfaahinteyda hoos ku sharraxey.
Kukiyadaha kujira boggan internetka waxay ka caawinayaan:
Ka dhig shabakadan mid sax ah
Kaydso inaad gasho markasta oo aad booqato boggan
Xusuusnow dejintaada inta lagu gudajiray iyo inta u dhaxeysa booqashooyinka
Kuu oggolaanayaa inaad daawato fiidyowyo
Hagaajinta xawaaraha / amniga goobta
In aad bogagga kula wadaagi karto shabakadaha bulshada
Si joogto ah u hagaajiso websaydhkan
Ku tus iidhehyada ku saleysan caadooyinkaaga biraawsarka
Waligeey u isticmaali maayo cookies inaan:
Ururi macluumaad shaqsi lagu aqoonsan karo (ogolaansho la'aan ogolaashahaaga)
Ururi macluumaad xasaasi ah (adiga oo aan ogolaansho lagaa helin)
La wadaag xogta aqoonsiga shaqsiyaadka dhinac saddexaad
Kukiyada sadexaad ee aan u isticmaalno degelkan iyo inaad ogaato
Websaydhkan, sida bogagga intarnetka badankood, waxaa ku jira astaamaha ay bixiyeen qaybaha saddexaad.
Naqshadaha cusub ama adeegyada dhinac saddexaad ayaa sidoo kale si joogto ah loogu tijaabiyaa talooyinka iyo warbixinnada. Tani waxay mararka qaarkood wax ka beddeli kartaa goobaha cookie-ka iyo in cookies-ka aan lagu faahfaahiyay siyaasaddan ay soo muuqanayaan. Waa muhiim inaad ogaato inay yihiin buskud ku meel gaadh ah oo aan had iyo jeer suurtagal ahayn in la sheego oo ay leeyihiin oo keliya ujeedooyin daraasad iyo qiimeyn. Sinnaba sinaba uma adeegsan doonaan cookies-ka wax u dhimaya asturnaantaada.
Waxaa ka mid ah cookies-ka-deggan ee saddexaad deggan ee ugu deggan:
Kuwa ay soo saareen adeegyada falanqaynta, gaar ahaan, Google Analytics si looga caawiyo websaydhada inay falanqeeyaan adeegsiga ay adeegsadaan isticmaaleyaasha websaydhka oo ay ku hagaajinayaan adeegsiga, laakiin kiis ahaan kuma xirna xogta tilmaamaysa adeegsashada.
Google Analytics waa adeegga falanqaynta shabakadda ee ay bixiso Google, Inc., waa shirkad Delaware ah oo xafiiskeeda ugu weyn ku yaal 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Mareykanka ("Google").
Isticmaaluhu wuu la tashan karaa nooca buskudka ay isticmaalaan Google, Google Cookie iyo Khariidadaha Google, sida ku cad qodobada ku qoran boggiisa ku saabsan waxa nooca buskud ee la isticmaalay.
Raadinta Google Adwords: Waxaan isticmaalnaa raadinta beddelka Google AdWords. Raadinta beddelaaddu waa aalad bilaash ah oo tilmaamaysa waxa dhacaya ka dib haddii macaamilku ku dhufto xayeysiiskaaga, haddii ay alaab iibsadeen ama ay ku qoreen joornaalkaaga. Kukiyadaani waxay dhacayaan 30 maalmood ka dib mana ku jiraan macluumaad kuu aqoonsan kara shaqsi ahaan.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan raadraaca Beddelka Google iyo siyaasadaha asturnaanta.
Dib-u-habeynta Google AdWords: Waxaan u isticmaalnaa Google AdWords Remarketing oo adeegsada cookies si ay nooga caawiso inaan gaarsiino xayeysiisyada khadka tooska ah ee la beegsanayo ee ku saleysan booqashooyinkii hore ee boggeena Google waxay u isticmaashaa macluumaadkan inay ugu adeegto xayeysiinta bogagga internetka ee dhinac saddexaad oo kala duwan. Kukiyadaani way dhacayaan mana ku jiraan macluumaad shaqsi ahaan kuu aqoonsan kara. Fadlan u tag ka Ogeysiiska Asturnaanta Google si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Xayeysiinta ay soo saartey AdWords, kuna saleysan danaha isticmaalaha, waxaa laga soo qaatay oo lagu muujiyey macluumaadka laga soo ururiyey waxqabadyada iyo marin-habaabinta uu isticmaaleygu ku sameeyo websaydhyada kale, isticmaalka aaladaha, barnaamijyada ama barnaamijyada la xiriira, is-dhexgalka aaladaha kale ee Google (DoubleClick Cookies).
DoubleClick waxay isticmaashaa cookies si loo hagaajiyo xayeysiinta. Kukiyada waxaa badanaa loo isticmaalaa inay bartilmaameedsadaan xayeysiimaha ku saleysan waxyaabaha la xiriira isticmaale, kor loogu qaado warbixinnada waxqabadka ololaha lagana fogaado muujinta xayeysiiska uu isticmaaleyaashu horey u arkay.
DoubleClick waxay isticmaashaa IDs cookie si ay ula socoto xayeysiimaha lagu muujiyey daalacyada qaarkood. Waqtiga lagu daabacayo xayeysiimaha biraawsarka, DoubleClick wuxuu isticmaali karaa ID-ka cookie ee biraawsarkaas si loo hubiyo xayeysiimaha DoubleClick ee horay loogu muujiyay biraawsarkaas. Tani waa sida ay DoubleClick uga hortagto soo bandhigida xayeysiimaha uu isticmaaley horay u arkay. Sidoo kale, ID-yada cookie-ga ayaa u oggolaanaya DoubleClick inay duubto beddelka la xiriira codsiyada xayeysiinta, sida marka isticmaaleygu arko xayeysiiyaha DoubleClick iyo, gadaal, wuxuu adeegsadaa isla biraawsarka inuu booqdo websaydhka xayeysiiyaha oo uu wax iibsado .
Kukiyada DoubleClick kuma jiraan macluumaad shaqsi lagu aqoonsan karo. Mararka qaarkood, cookie waxaa ku jira aqoonsi dheeri ah oo la mid ah muuqaalka cookie-ga. Aqoonsiraha waxaa loo isticmaalaa in lagu aqoonsado olole xayeysiis ah kaas oo isticmaale hore loogu soo bandhigay; Si kastaba ha noqotee, DoubleClick kuma keydiso nooc kale oo xog ah macluumaadka cookie-ka, intaas waxaa dheer, macluumaadku shakhsi ahaan lama aqoonsan karo.
Adigoo adeegsada internetka ah, wakhti kasta ayaad awood u yeelan doontaa inaad tirtirto macluumaadka la xiriira caadooyinkaaga biraawsarka, iyo astaanta la xiriirta ee abuurtay caadooyinka loo gudbiyey, adoo toos u galaya oo lacag la’aan ah: https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=es . Haddii isticmaale uu curyaamiyo howshan, cinwaanka 'cookie Double cookie ID' ee ku jira biraawsarka isticmaaleyaasha waxaa lagu daabacay wejiga "OPT_OUT". Sababta oo ah aqoonsi cookie gaar ah oo jira, kukielka naafada ah lama xiriirin karo biraawsar gaar ah.
WordPress: es waa isticmaale ka mid ah shabakadda WordPress ee bixinta iyo martigelinta martigelinta, oo ay leedahay shirkadda Waqooyiga Ameerika ee Automattic, Inc. Ujeeddooyinka noocan oo kale ah, isticmaalka cookies-ka noocaas ah ee nidaamyadu waligood kuma hoos jiraan kantaroolka ama maaraynta qofka mas'uulka ka ah websaydhka, waxaa laga yaabaa inay wax ka beddel shaqadeeda wakhti kasta, oo gal cookies cusub.
Cookies-yadaani sidoo kale uma sheegaan wax faa iido ah qofka mas'uul ka ah websaydhkan. Automattic, Inc., waxay sidoo kale isticmaashaa buskudyo kale si ay uga caawiso ogaanshaha iyo ula socodka booqdayaasha shabakadaha WordPress, wax ka ogaato isticmaalkooda websaydhka Automattic, iyo sidoo kale doorbidooda helitaankooda, sida waxaa lagu soo ururiyaa qaybta "Kukiyada" ee aad siyaasadda asturnaanta.
Goobaha fiidiyowga sida YouTube ayaa sidoo kale loo isticmaalaa
Meelaha Adeegga Xiriirinta (Waxay ku rakibidaan cookies cookies si ay ula socdaan iibka ka yimid websaydhkan):
Amazon.com iyo .es: Ireland.
Kukiyadaha shabakadaha bulshada: Kukiyada ka imanaya shabakadaha bulshada waxaa lagu keydin karaa biraawsarkaaga intaad ku dhexjirtid shabakada shabakada shabakada.Feliska, markaad adeegsato batoonka si aad ula wadaagto waxyaabaha ku jira shabakada shabakada bulshada.
Shirkadaha dhaliya cookies-kaan ee u dhigma shabakadaha bulshada ee websaydhkan ayaa leh siyaasado gaar u gaar ah oo ay leeyihiin:
Kaydiyaha iskuxirka ee Linkedin, sida lagu siiday Siyaasadda cookies
Saamaynta asturnaanta waxay ku xirnaan doontaa shabakad bulsho kasta waxayna ku xirnaan doontaa goobaha asturnaanta ee aad ka dooratay shabakadahaan. Si kastaba ha noqotee, qofka mas'uulka ka ah websaydhkan ama xayeysiiyayaashu ma heli karaan macluumaad shaqsi lagu garan karo oo ku saabsan cookies-kaan.
Marka xigta, iyo sida loogu baahan yahay qodobka 22.2 ee LSSI, buskudyada si joogto ah loogu rakibi karo intaad booqanaysid degelkan ayaa faahfaahsan:
MAGACA WAQTIGII UJEEDO
Laha: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923
Waxay dhacayaan dhamaadka kalfadhiga. Waxay keydiyaan macluumaadka isticmaalaha iyo kalfadhiyadooda si loo wanaajiyo khibradaha isticmaalaha.
NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz 2 sano laga soo bilaabo qaabeynta ama cusboonaysiinta. Waxay kuu oggolaanayaan inaad raadraacdo websaydhka adoo adeegsanaya aaladda Google Analytics, oo ah adeeg ay bixiso Google si aad u hesho macluumaad ku saabsan marin u helka isticmaaleyaasha websaydhada. Qaar ka mid ah xogta loo keydiyay falanqaynta dheeraad ah waa: tirada jeer ee uu isticmaaley booqday degelka, taariikhda booqashadii ugu horreysay iyo ugu dambeysay ee isticmaaleha, muddooyinka booqashooyinka, bogga uu isticmaaleahu ka adeegsaday bogga internetka. , mashiinka raadinta ee isticmaaleyaashu u adeegsaday inuu ku soo gaaro websaydhka ama isku xirka aad dooratay, meesha adduunka ka uu isticmaalehaagu ka helo, iwm. Qaabeynta buskudkaan waxaa go'aaminaya adeegga ay bixiso Google, waana sababta aan kugula talinay inaad fiiriso Bogga gaarka ah ee Google si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cookies-ka aad isticmaaleyso iyo sida aad ugu gabban kartid (fahamka ah inaanaan mas'uul ka aheyn waxyaabaha ku saabsanaanta iyo xaqiiqada websaydhyada dhinac saddexaad)
.gumroad.com__ga Dhamaadka kalfadhiga Waa madal lagu iibiyo buugaagta dijitaalka ah.
30 maalmood Cookie-kaan waxaa loo isticmaalaa inuu ku laabto bartilmaameedka, kobcinta, ka warbixinta iyo uqeybinta xayeysiinta internetka. DoubleClick waxay u diraa cookie biraawsarka ka dib daabacad kasta, guji ama waxqabad kale oo keenaya wicitaan loogu talagalay server-ka DoubleClick. Haddii biraawsarku aqbalo cookie-ka, waa lagu kaydiyaa. Macluumaad dheeri ah
HelClicky_jsuid 30 maalmood Qalabka Tirakoobka Websaydhka Istaatistikada waxaa loo isticmaalaa in lagu soo ururiyo tirakoobka isticmaalka websaydhka ee aan la aqoon. Macluumaadka la ururiyey waxaa ka mid ah Protocol-ka Internetka (IP), nooca biraawsarka, Bixiyaha Adeegga Internetka (ISP), taariikhda / waqtiga shaabadda, tixraaca / gelitaanka / bogagga / si loo falanqeeyo isbeddellada, loo maamulo goobta, iyo dhaqdhaqaaqa isticmaalaha agagaarka goobta. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa bogga Guji shuruudaha gaarka ah .
Waxaad Tube 2 sano kadib qaabeynta Waxay noo ogolaaneysaa inaan ku duubno fiidiyowyada YouTube-ka. Qaabkani wuxuu u dejisan karaa buskudka kumbuyuutarkaaga marka aad gujiso fiidiyowga YouTube-ka, laakiin YouTube ma kaydin doono macluumaadka cookie ee shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo ee ka imanaya aragtida fiidiyowga ee la dhex gelinayo iyadoo la adeegsanayo habka asturnaanta ee la wanaajiyey. Wixii macluumaad dheeraad ah booqo bogga xiisaha macluumaadka ee YouTube
Acumbamail 2 sano kadib qaabeynta Waa matoor rukhsad bixiya macluumaad dheeraad ah
PYPF 1 bishii Kukiyadaha farsamada Adkee amniga si loo helo marinka lacagta lagu bixiyo ee PayPal. Way kula xiriiri karaan paypalobjects.com.
Sida loo maareeyo loona curyaamiyo cookies-kaan
Haddii aadan dooneynin websaydhada inay kumbuyuutar kasta geliyaan kombiyuutarkaaga, waad la qabsan kartaa goobaha biraawsarka si laguula socodsiyo ka hor intaan la soo dejinin wax cookies ah. Si la mid ah, waad la qabsan kartaa qaabeynta si markaas biraawsarku diido dhammaan cookies-ka, ama keliya cookies-yada saddexaad. Sidoo kale waad tirtirikartaa midkastoo ka mid ah buskudka kujira kombuyutarkaaga. Maskaxda ku hay inaad u baahan tahay inaad la qabsato qaabeynta biraawsar kasta iyo qalab kasta oo aad u isticmaasho gooni.
Macluumaadka (arroba) Disco.online waxay u diyaarisaa dadka isticmaala ee raba inay ka hortagaan rakibida cookies-ka aan kor ku soo xusnay, xiriiriyeyaasha ay ujeeddadan u leeyihiin daalacanayaashu isticmaalkooda waxaa loo tixgeliyaa inay sii ballaadhan yihiin:
Nidaamka cookies-ka ayaa la cusbooneysiiyay ugu dambeysay 18/04/2016
CUNTADA Si aad u barato CULEYSKA LASO CULIS LUMIS | CAAFIMAAD DAAWASHADA Baybalka CAAFIMAAD Sidee Dios Kala Duwan Ujeeddo Ereyada Church Catholic Halyeeyada Amarada Matemáticas Riyadayda Salaada Popular Diimaha Karaamada Santos Qeyb la'aan Riyooyin Miisaska Tarot Whatsapp